Taorian’i Maminirina Jean Eddy: nosamborina omaly Rajaonah Mbola | NewsMada
Raha momba ny raharahan-kolikoly manodidina ny fanondranana an-tsokosoko andramena ny nisamborana an’i Maminirina Jean Eddy, afakomaly, mikasika ny hosoka sy fanaovana hosoka amin’ny ladoany kosa ny nisamboran’ny polisy an-dRajaonah Mbola, omaly tolakandro tetsy Antsahabe.
Mitovitovy tamin’ny fomba nisamborana an’i Maminirina Jean Eddy, teny Ivandry, ihany ny nisamboran’ny polisy nanao saron-tava an-dRajaonah Mbola, omaly tolakandro. Notanana etsy amin’ny Brigade criminelle ny lehilahy taorian’izany. Teo amin’ny parking ampitan’ny Score Antsahabe Rajaonah Mbola ny nosamborina, tao anaty fiarany tokony ho tamin’ny 5 ora hariva. Nentina avy hatrany eny amin’ny BC Anosy, alaina ambavany. Raha ny vaovao voaray, anisan’ny maha voarohirohy azy ny hosoka teny anivon’ny ladaony. Eo koa ny anto-bola tsy misy antoka.
Tonga teny an-toerana avy hatrany ny mpisolovava ity mpandraharaha ity ary nilaza fa tsy ara-dalàna ny fisamborana. ”Tsy nisy ny taratasy fisamborana naseho, ary tsy nisy ny fampilazana mialoha momba ny fakana azy”, hoy izy.
Raha ny filazan’ity mpisolovava ity ihany, tsy nety nanaraka ireo mpitandro filaminana Rajaonah Mbola raha vao tsy nampiseho taratasy ireo. Novakin’ireo ny fitaratry ny fiara noho izany namoahana azy tao. Nosavaina avokoa ny fiara rehetra, ary hatramin’ny sakaosy teny amin’ity mpandraharaha ity, sy ny teny an-kodiny aza. Nilaza ilay mpisolovava tonga teny amin’ny BC Anosy, omaly, fa tsy nisy na inona na inona hitan’ireo mpitandro filaminana ireo tany aminy.
Efa natao famotorana teny amin’ny Bianco
Tsiahivina fa efa natao famotorana teny amin’ny Bianco sy teny amin’ny Chaîne penale 67 ha Rajaonah Mbola. Resaka fanaovana hosoka sy kolikoly teny anivon’ny ladoany Toamasina ny anton’izany. Voalaza fa raharaha maromaro ny mahatafiditra azy ity, ary anisan’ny voalaza ihany koa ny resaka fanondranana andramena.
Miandry ny fanazavana avy amin’ny tompon’andraikitra momba ity rahataha ity ny rehetra. Efa nisy fanenjehana natao azy, tsy mbola nisy kosa anefa hatramin’izay ny fisamborana fa nampanantsoina hatrany. Voalaza anefa fa efa andro maromaro ny nikarohana azy, ary izao nosamborina izao. Andrasana ny fivoaran’ny toe-draharaha.